musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Iyo Yakanakisa Nhumbi Dzokurwisa COVID-19 Delta Mhando
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sezvo COVID-19 Delta misiyano ichienderera ichipararira nekukurumidza muUnited States, iyo Centers for Disease Prevention and Control (CDC) yakapa nhungamiro nyowani, kunyanya zvine chekuita nekupfeka mamask, uyezve inoshanda kune avo vakabaiwa zvakakwana .
Zano rakanakisa kubva kuCDC kune wese munhu - kubaiwa jekiseni kana kuti kwete - ndiko kuvhara.
ICDC inotaura kuti izvi zvinonyanya kukosha kune vanhu vasina kugunun'una.
Vaya vari panjodzi huru vanosanganisira kuratidzwa kune mumwe munhu akamboedzwa aine avo vane chirwere cheshuga, mamiriro emwoyo, uye vakafuta.
Iyo yekupedzisira ichangoburwa yeCDC kubva nhasi, Chikunguru 27, 2021, inotungamirwa kune yakazara-vaccinic vanhu uye yakavakirwa pane humbowo hutsva pane B.1.617.2 (Delta) musiyano urikutenderera muUnited States.
ICDC yakawedzera kurudziro yevakazara-vakabaiwa vanhu kuti vapfeke maski munzvimbo dzeveruzhinji dzemukati munzvimbo dzekutapudza kwakanyanya kana kwakanyanya. Uyezve, iyo CDC akataura kuti vanhu ivavo vangangoda kupfeka chifukidzo zvisinei nezinga rehutachiwana, kunyanya kana vasina kuzvidzivirira kana vari panjodzi huru yechirwere chakakomba kubva kuCOVID-19.
Izvi zvinoshandawo kana paine mumwe munhu mumba mavo asina kudzivirirwa, panjodzi yekuwedzera yechirwere chakakomba, kana asina kubayiwa zvakakwana. Vanhu vari panjodzi yakanyanya yechirwere chakakomba vanosanganisira vakura uye avo vane mamwe marapirwo, akadai seshuga, kufutisa kana kufutisa, uye mamiriro emwoyo.